Xeebaha muuqaalka ah, biyaha cadcad iyo taariikhda yar waxay ka dhigtaa Andamans doorashadii ugu fiicnayd ee fasax lagu raaxeystay, fasax farxad leh, safaro dheer, oo ku wareegsan jahwareerka jasiiradda iyo, si aad u ballaadhan oo badda qoto dheer leh. Laga soo bilaabo magaalooyinka dhaqamada kala duwan ee Port Blair ilaa xeebaha cad cad ee Neil iyo Havelock Islands iyo godadka ugu hooseeya ee Diglipur, Andamaanku waxay wax u bixiyaan dalxiis kasta. Waxay leedahay qaar ka mid ah xeebaha ugu quruxda badan Aasiya kuwaas oo ka baxsan filimka dabiiciga ah ee dabiiciga ah ama wargeyska safarka. Kooxdan jasiiradaha ah waa mid ka mid ah meelaha ugu fog ee adduunka. Arinkaan wuxuu ku siin doonaa fursad aad ku baadhi karto xeebahaas oo ay leeyihiin fasaxyo fasax ah.
05 Nights / 06 maalmood | Code Code: 030
DAY 01: ARRIVE PORT BLACK
Marka ay timaado garoonka Garoonka Blair, wakiilkayagu wuxuu heli doonaa oo u raaci doonaa hudheelka. Ka dib markii la soo galo hoteelka iyo nasashada nasashada, waxaynu ku bilaabi doonnaa dibadbax lagu soo bandhigayo Matxafka "Anthropological Museum", kaas oo soo bandhigaya aaladaha, qaabka noolaha, farshaxanka iyo farshaxanka qabaa'ilka aboriginal ee Andaman & Nicobar Islands ka dibna ka soo baxa Matxafka "Anthropological Museum", waxaan ku sii soconaa Corbyn's Cove xeebta. Nalalka & Sumarka Muuqaal ee Jeelka Jilayaasha: Fiidkii, waxaan u dhaqaaqnaa Nuurka iyo Muuqaalka Muuqaalka ee Jeelka Jilayaasha halkaa oo ah ficil ka mid ah xoriyadda xoriyadda oo la noolaado.
DAY 02: XADGUDUB CALAAMI AH - BADBAADO ISLAND - NORTH BAY ISLAND (CORAL ISLAND) - BARNAAMIJKA HARBOR (VIPER ISLAND)
Maanta, quraacda ka dib waxaan sii socon doonaa maalin buuxda oo u soconaysa Ross Island, North Bay (Coral Island) iyo Viper Island (Harbor Cruise). Ross Island: Marka hore waxaan bilaabeynaa safar aad u xiiso badan (oo doon) doonaya Ross Island, oo ah caasimadda kale ee Port Blair inta lagu jiro xukunka British-ka, hadda waxay u taagan tahay kalsoonida, dhismaha ku dhow qashinka. Matxafka yaryar wuxuu soo bandhigaa sawirada iyo qurxinta kale ee Britishka, oo la xidhiidha jasiiradahaas. North Bay (Coral Island): Laga soo bilaabo Ross Island, waxaan u soconaa safar farxad leh oo ku socda jasiiradda North Bay (Coral Island) oo bixisa kalluumeyaal qurux badan, kalluun midab leh iyo nolol hoose. Waxaan arki karnaa kuwan midabada midabka leh iyo nolosha badda hoostiisa hoostiisa iyadoo lagu marayo doon yar oo qabow iyo dabeylo (optional). Harbour Cruise (Viper Island): Galabta, waxaan ku soconaa safar ku yaala dekedda, muuqaalka guud ee toddoba dhibcood oo ka soo jeeda badda, tusaale ahaan, dekedda, boodhka, iwm, oo ay ku jirto safar uu ku tagayo Viper Island meel lagu fuliyo.
DAY 03: XADGUDUB CALAAMI AH - HALELOCK ISLAND
Maanta, waxaan safarkeena ku bilaabi doonaa Havelock Island iyada oo la marayo safar laga soo galo Port Blair Harbor. Markaad timaaddo Havelock Island, wakiilkayagu wuxuu kuu heli doonaa oo kuu kaxeyn doonaa si aad u hubisid in uu yimaado. Hawlaha firfircoon ee firfircoon ee Havelock Island: Safar gaaban oo u socdaalaya Elephant Beach: Rs.750.00 Qof kasta (oo ka mid ah Boatka Gaarka ah, Hagaha & qalabka Shillinta)
Kadib quraac, waxaan ku sii soconaa Radhanagar Beach (xeebta No. 7), Times Magazine ayaa ku qiimeeyay xeebta ugu fiican xeebaha ugu wanaagsan Asia. Waa meesha ugu fiican ee lagu dabaasho, badda lagu qubaysto iyo qulqulaya xeebta qorraxdu dhunkatay. Ka dib markii duhurkii waxaan dib ugu soo laabannay dekedda Blair (iyada oo loo marayo ferry) iyo habeenkii habeenkii ee Port Blair.
MAALINTA 05: XADGUDUBKA HUBKA - MAGAALADA MUWAADINKA - SHIRKADDA
Ka dib quraacda, waxaan kaa qaadeynaa safarka magaalada Blair oo ka hadlaya xabsiyada Jeelka (National Memorial), Chatham oo sawir ku dhuftay (dhagaxii ugu weynaa iyo weynaa ee Aasiya), Matxafka Dhulka, Samundrika (Madxafka Naval Marine), Xarunta Sayniska, Gandhi Park , Marina Park, Andaman Water Sports Complex. Gadashada: Fiidka, waxaan sii wadeynaa Sagarika (Govt Sachs Handcraft) iyo suuqa maxaliga ah ee dukaameysiga.
DAY 06: DEPART OO IYO ILAALO ISLANDS
Ku dhufo Blair / Limbarka Socdaalka Soo noqoshada xusuusta cajiibka ah.